Manerinerina-Ambatoboeny: tanàna filamatra nandray ny fidirana manetriketrika an-tsekoly eto Boeny | Région Boeny
Raha renivohitry ny distrika no mahazatra hatrizay isan-taona handraisana ny lanonan’ny fidirana manetriketrika an-tsekoly, dia nisafidy ny kaomina ambanivohitr’I Manerinerina ny Foibem-paritry ny Fanabeazam-pirenena eto Boeny (DREN) hanatanterahana izany ho an’ity taom-pianarana 2016-2017 ity.
Ny zoma 18 novambra no notanterahina tao amin’ny kaomina ambanivohitr’I Manerinerina, distrikan’Ambatoboeny, 188km miala an’I Mahajanga, ny fanamarihana ny fidirana manetriketrika an-tsekoly 2016-2017 eto Boeny.
Nanatrika izany avokoa ireo solotenan’ny Farim-piadidim-pampianarana isan’ambaratongany avy amin’ireo distrika enina mandrafitra ny faritra.
Tanàna efa mandroso I Manerinerina noho izy manamorona ny làlam-pirenena faha-6, ka efa ahitana ireo sekoly isan’ambaratongany na miankina amin’ny fanjakana na tsia.
Fotoana fanaovana tatitra fohy mikasika ny vokam-pampianaran’ny taon-dasa sy fanatsidihana ny fandaharan’asan’ny taona hiasana ary fitsofan-drano sy fankaherezana ny mpianatra, ny mpanabe, ary ireo ray aman-drenin’ny mpianatra ny dikan’ny hoe “fidirana manetriketrika an-tsekoly” hoy ny fanazavan’ny Préfet an’I Mahajanga, izay tonga nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy, notron’ny Loholon’I Mahajanga Fernand Jeannot sy ny Solombavambahoaka voafidy tao Ambatoboeny, ary ny Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy.
Araka izay dia nanome atontan’isa vitsivitsy mikasika ny taom-pianarana 2015-2016 ny DREN Boeny, ka fantatra tamin’izany fa niisa 136 880 ireo mpianatra amin’ny sekoly ambaratonga voalohany tamin’iny taona iny, 38 854 ny ao amin’ny ambaratonga II, ary 13 862 ny amin’ny lycée, ho an’ny miankina sy tsy miankina rehetra eto Boeny.
Mitontaly 5826 kosa ireo mpampianatra ary 285 ireo mpandraharaha ara-panabeazana samy ara-panjakana. Vokatry ny fiaraha-miasan’ireo rehetra ireo ary dia 58% no afaka CEPE 2016, 41% ny afaka BEPC ary 34% ny afaka baka ankapobeny, 57% ny baka teknika.
In-telo miantoana ny fandraisana mpampianatra FRAM ho mpiasam-panjakana araka ny tatitra ihany, ka anisany ireo nahazo be indrindra ny teto Boeny satria nahatratra 2017 no voaray raha 87 mpampianatra FRAM isaky ny CISCO ihany no isa nofaritan’ny MEN ho an’ny manerana ny Nosy hoy ny DREN Boeny.
Ankoatra ireo dia nambarany fa nahatratra roa lavitrisa mahery ny fanampiana tambin-karaman’ny mpampianatra FRAM teto Boeny avy amin’ny Fanjakana foibe.
Nisy ny fizarana fitaovam-pampianarana ho an’ireo mpampianatra ara-panjakana ary fitaovana fialam-boly ho an’ny fanatanjahantena an-tsekoly ho an’ny mpianatra rehetra amin’ny CISCO enina, avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny DREN Boeny, toy ny UNICEF.
Fametrahana ny Ben’ny tanàna:
Mialoha ny fandraisam-pitenenana ho an’ity lanonam-pampianarana ity dia nosalorana samboady
ary napetraka amin’ny maha Ben’ny tanàna azy araka ny didim-panjakana tamin’ny 18 septambra 2015 Atoa Davy André.
Niharan-dozam-pifamoivoizana ny tenany taorian’ny nahalany azy tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna ny taona 2015, ary nisedra tsy fahasalamana volana maro.
Efa salama ary afaka handray ny fitantanana ny Kaomina izy ankehitriny ka izao niroso tamin’ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy izao, izay notanterahin’ny ny Préfet an’I Mahajanga.
Efa Ben’ny tanàna tao an-toerana teo aloha Atoa Davy André izao voafidy izao indray. Anisany nahatonga an’I Manerinerina ho tanàna filamatra teto Boeny tamin’ny taona 2008 izy. Ary mbola vonona ny hampifaninana an’I Manerinerina amin’izany filamatra izany, araka ny fanambiny.